SOANIERANA - IVONGO : Tsy mety vita ny famindram-pahefana eo amin’ny lehiben’ny distrika
Nosoloin’ny fitondrana ny lehiben’ny distrika ao Soanierana- Ivongo. Fanoloana izay efa nandrasan’ny vahoaka tao an-toerana efa ela. 11 avril 2018
Fitarainana maro mantsy no efa nataon’ny mponina any an-toerana ny amin’ny tokony hanesorana an-dRasolofo Louis. Ny filan-kevitry ny minisitra ny 28 marsa lasa teo no nanendry an’i Maharitra Dyno Franck ho lahiben’ny distrikan’i Soanierana-Ivongo.
Araka ny vaovao marim-pototra voaray avy any Soanierana-Ivongo anefa, dia mitsoaka famindram- pahefana ny lehiben’ny distrika teo aloha, Rasolofo Louis.
Ny zoma 6 avrily lasa teo no daty voatondro hanaovana ny famindram-pahefana saingy tsy nipoitra mihitsy ilay lehiben’ny distrika teo aloha.
Nilaza izy fa marary. Ny mahagaga ny maro anefa, dia ny alin’iny ihany dia hita ao anaty toeram-pisotroana.
Ny olana anefa, dia any aminy ny lakilen’ny birao fiasan’ny lehiben’ny distrika. Hatramin’ny fotoana nano ratanay ny lahatsoratra (alatsinainy antoandro), dia mbola tsy vita ny famindram-pahefana. Efa leo amin’ny fihetsika feno fanafintohinana ataon’ny lehiben’ny distrika teo aloha io ireo vahoaka ao an-toerana ka miantso ny fanjakana foibe mba handray fepetra. Sahirana mantsy ireo mila raharaha ao amin’ny biraon’ny distrika.
Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (438) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (160) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (72) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (70) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (64) 2 mars 2021 Vehivavy iray maty tao Nosy Be, mitontaly 83 ireo marary CORONAVIRUS ATY DIANA (50) 2 mars 2021